विरगञ्जको ग्याँस उद्योगमा आगो लागेपछि बनेपाका स्थानीयमा त्रास, बाक्लो मानव बस्तीको बीचमा ५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालित « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
विरगञ्जको ग्याँस उद्योगमा आगो लागेपछि बनेपाका स्थानीयमा त्रास, बाक्लो मानव बस्तीको बीचमा ५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालित
बनेपा । विरगञ्ज स्थित एक ग्यास उद्योगमा बुधबार लगातार ८ घण्टासम्म आगलागी भएपछि अन्य ग्यास उद्योग रहेका आसपासका स्थानीयहरु त्रसित हुन थालेका छन् । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको थापा गाउँको एकै स्थानमा तीनवटा ग्याँस उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै बनेपा २ नालामा एउटा र बनेपा १४ भैंसेपाटीमा एउटा गरी बनेपा नगरपालिका भर ५ वटा ग्याँस उद्योग रहेका छन् ।
विरगञ्जको ग्याँस उद्योगमा बुधबार आगलागी भएपछि बनेपाका स्थानीयहरु त्रसित भएका हुन् । ‘एक किलोमिटरको परिधिभित्र ४ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसमा पनि घना बस्तीका बीचमा हाम्रो सुरक्षा अब कसरी हुन्छ । हामी त्रासमा छौँ, नालाका स्थानीय विश्वराम श्रेष्ठले दुखेसो पोखे । बनेपा १० को थापा गाउँमा ३ वटा ग्यास उद्योग एउटै प्लटमा जोडिएको छ । ‘यहाँ रहेको बाक्लो बस्तीमा कतै दुर्घटना भयो भने, यसको परिणाम के होला ? उनले प्रश्न गरे । बनेपा नगरपालिका मेयर लक्ष्मीनरसिं बादेले उद्योगहरुलाई केही दिनमा नै सचेत गराउने गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न लागिएको बताए ।
काभ्रेका ग्यास उद्योगहरुमा आगलागी नियन्त्रण र त्यसको जोखिमबाट मुक्त हुनका लागि आवश्यक सामग्री रहेको एलपी ग्यास उद्योग व्यवसायीका कोषाध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले दावी गरे । “पैसा मात्रै हेर्ने ? एक ठाउँमा नै एक किलोमिटरको दुरुमा ३ वटा उद्योग छन्, विरगंञ्जको घटनापछि त्रासमा रहेको बनेपा १० थापा गाउँका शुसिल थापाले बताइन् । मरे हामी गाउँले मर्ने, नियमनकारी निकाय त सधैँ प्रभावमा नै रहँने त होला उनको गुनासो थियो ।
बनेपा १० मा सगरमाथा ग्याँस उद्योग (सगर ग्याँस), चण्डेश्वरी ग्याँस उद्योग (चण्डी ग्याँस) र सूर्य ग्याँस उद्योग (सूर्य ग्याँस) रहेका छन् भने बनेपा १४ भैंसेपाटीमा हिमाल ग्याँस उद्योग (हिमाल ग्याँस) र बनेपा २ नालामा उग्रचण्डी ग्याँस उद्योग (लोकप्रिय ग्याँस) उद्योग मानव बस्तीबाट अत्यन्तै नजिक रहेर संञ्चालित छन् । एकै ठाउँमा रहेका तीन ग्याँस उद्योगहरु सरकारी मापदण्डअनुसार दर्ता र सञ्चालन गर्न मापदण्ड पुग्दैन । तर सरकारले यिनै ग्याँस उद्योगहरुलाई नै मापदण्ड पूरा भएको भनेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी मापदण्डअनुसार पनि यी उद्योगहरु बस्तीबाट कम्तीमा १ किलोमिटर टाढा हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तीनवटै उद्योगहरु मानवस्तीका बीचमा रहेका छन् । यदि ग्याँस उद्योगमा कुनै किसमको दुर्घटना भएमा काभ्रेको बनेपा, नाला लगायका स्थानमा प्रभाव पर्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा खेपिरहेको नालाको उग्रचण्डी ग्याँस उद्योग (लोकप्रीय) ग्याँस उद्योग सञ्चालन विरुद्ध स्थानीयहरु आन्दोलित समेत भइरहेका छन् । ग्याँस उद्योगको स्थापना हँुदा यसले आवश्यक सुरक्षा पहिले नै अपनाउन आवश्यक हुन्छ । ग्याँस प्रज्जोलनशील पदार्थ भएका कारण जुनसुकै समय आगो लाग्नसक्ने भएकाले आगो नियन्त्रणका लागि यसका कम्पनीले अग्नि नियन्त्रक (फायर फाइटिङ मेसिन) राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कम्पनीहरुमा अत्यावश्यक ‘फायर कुलिङ’ र ‘वाटर कुलिङ्गको व्यवस्था हुन आवश्यक हुन्छ ।